Tareenadu Coradia iLint Low-fuushan Europe | Save A tareenka
Home > safarka Europe > Tareenadu Coradia iLint Low-fuushan Europe
Gadashada tigidhada tareenka Yurub had iyo jeer waa xiiso leh. First of dhan, at Save A Tareenku waxa aanu had iyo jeer raadinaya tigidhada tareenka qiime jaban kuu. Waxa aynu baadhis ku saabsan mawduucyo sida fiican hotels iyo sodcaalladoodii oo qurux badan tareenka. Laakiin mawduuca ugu kulul in industry tareenka waa deegaanka. The Coradia Ilint waa tareenka ugu horreeya ee adduunka ugu hooseeya. waa malaha tareenka ugu jawiga wanaagsan deegaanka.
Tareen yar oo raacaya low-yurub
The Coradia Ilint waa tareenka hydrogen ku salaysan low-fardaha. Waxaa sodcaalladoodii oo u dhexeeya Germany iyo Czech Republic. tareenka cusub ee dhawaan la dhamaystiray baxsad 4-todobaad ah imtixaanka. Inta lagu jiro imtixaanada, tareenka ku tegey 80 KM saacadiiba. Baaritaanada ayaa sidoo kale la qiimeeyo nasashada ee tareenka. Dhinacyada kale wali waa wali fidmeeyey si loo hubiyo in safar tareen siman.
Vienna si ay Tareenadu Munich
Hydrogen tareen kaliya
Tareenka cusub ayaa ah tareenka unugga shidaalka ku shaqeeya tamarta adduunka ugu horreeya. Waxa kale oo uu isticmaalaa korontada for kala jar ah. Micnaha waxay bixin doontaa qiiqa eber ee sii deynaya biyaha keli ah iyo uumiga. Tareenka ayaa aamusan. The tareen low-saaran Coradia Ilint leeyahay dhinacyo gaar ah soo socda;
diinta tamar nadiif ah
tamarta dabacsan sabab u ah baytariyada kaydinta
maamulka Smart awoodda kala jar iyo tamarta laga heli karaa
Toyota isku dayeen in ay sidoo kale loo fuliyo hab hydrogen si baabuurta ay u muuqataa sida hab kaliya ee la shaqeeya tareenada. Tareenka ayaa la qorsheeyay si loo bilaabo in UK ee 2021. Coradia Ilint tareen-raacid hoose bilaabay guul leh marka lagu daro Jarmalka bilowgii 2018. Si uu tareenku u shaqeeyo wuxuu u baahan yahay xarun shidaal oo u gaar ah oo ka shidaal qaadata taas oo hadda ku taal dhabbaha Salzgitter.
Didier Pfleger, Madaxweyne ku xigeenka ee Alstom Germany iyo Austria ayaa sheegay in;
“baxsad imtixaanka Tani waa guul aad u weyn, maxaa yeelay, ilaalinta deegaanka iyo hal-abuurnimo farsamo”
“Intaa waxaa dheer in maanta nidaamka jar cusub, ilaa hadda si guul cadaato on giraanta imtixaanka, waxaa loo isticmaalaa on tareen markii ugu horeysay - talaabo weyn oo ku wajahan dhaqdhaqaaqa nadiifiye in Europe”
Luxembourg in Tareenadu Berlin
Qoraal ay wadaagaan Maksim Tsurkov (@m_tsurkov)
Guud ahaan waxaa jira 14 Coradia Ilint tareenada low-saaran in Europe. tareenada Kuwani oo beddali doona tareenada hadda sababta oo ah waxay u isticmaalaan naaftada. Inta badan xusid mudan, tareenada ee dabooli kara 1000 km ka mid ah taangiga Midab.
Canaaq Dongen, Xoghayaha Gobolka Baarlamaanka ee Wasaaradda Federaalka ah ee Gaadiidka iyo Kaabayaasha Digital (BMVI), ayaa sheegay in:
“Emission-free, tamar-ool ah oo kharash-ool ah – trainsets la drive unugyada shidaalka yihiin inta badan dhan kale bay'adda u fiican si ay u tareen naaftada. In la xoojiyo goobta warshadaha ee Hoose Saxony, waxaan rabnaa in aan maal mashruuca LNVG ee maalgashiga ku wareegsan 8.4 million euros. Lacagta ay tahay in la bixiyo Barnaamijka Innovation Qaranka ee hydrogen iyo Shiidaalka Cell technology“
Iibso tigidhada tareenka ee Europe. Intaas waxaa sii dheer, waxaa laga yaabaa in aad raadinayso jireen sodcaalladoodii oo qurux badan ama si fudud marinnada ugu dhaqsiyaha badan oo ugu jaban si aad u hesho si aad u socoto, waxaan ku helay kugu daboolay. Hada gal si aad Save A tareenka, Waxa kaliya qaadataa 3 daqiiqado si aan ugu isticmaalno mashiinka raadinta si aan u helno tikidhada ugu qiimaha badan ee la heli karo.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, ka dibna riix halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fworlds-first-low-riding-train%2F%3Flang%3Dso - (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)
Haddii aad rabto in aad noqon nooca in dadka isticmaala aad, si toos ah aad ku hanuunin karaa bogagga raadinta our. In link this, waxaad ka heli doontaa our jidadka tareenka ugu caansan – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside aad xiriir la leeyihiin bogag ku degtey Ingiriisi our, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/ja_routes_sitemap.xml, oo waxaad bedeli kartaa / ja si / ama / de iyo luuqado badan.
#hooseeya deegaanka tareenada
Waa Maxay The Meals Best Si Cun On Tareenadu
Tareenadu Free Tani Summer Waayo Qaangaarka
dhalinyarada tareenka, Tareenka Safarka ee Britain, Tareenka Safarka Faransiiska, Tareenka Safarka Jarmalka, Tilmaamaha Tareenka Safarka, safarka Europe